Ukuthetha ngokukhawuleza, i-ellipse ngumfanekiso onamaziko e-2 abizwa ngokuba yi-foci. Isixa semgama ukusuka kunoma yiphina indawo ye-ellipse kwenye ye-foci, kunye nomgama ukusuka kuloo ngongoma enye ukuya kwelinye igxininiso, iya kuhlala ilingana nesinye isixa somnye we-ellipse. Le ngcaciso yayo yeklasiki. Nangona kunjalo, ukwakha i-ellipse nge-Autocad, akuyimfuneko ukucacisa i-foci. I-geometry ye-ellipse nayo inokuqulunqwa kwe-axis encinci kunye ne-axis enkulu. I-intersection ye-axis enkulu kunye ne-axis encinci iya kubakho, ubuncinane kwi-Autocad, isikhungo se-ellipse, ngoko ke indlela yokwenza i-ellipses ngokuchanekileyo ngokupheleleyo kukubonisa indawo, ngoko umgama ukuya ekupheleni kwesinye seethasi kwaye umgama ukusuka kwiphakathi ukuya ekupheleni kwesinye i-axis. Uhlobo oluthile lwalolu hlobo luwukuba uqalise iqalo lokugqibela nelinye ekupheleni kwekota enye uze umgama ukuya kwenye.
Ngakolunye uhlangothi, i-elliptical arcs yiziqendu ze-ellipse ezingakhiwa ngendlela efanayo ne-ellipse, kuphela ukuba ekupheleni kufuneka sibonise inani lokuqala kunye neyokugqibela kwinqanaba le-arcs. Khumbula ukuba ngokucwangcisa okungekho phantsi kwe-Autocad, ixabiso le-0 kwinqanaba le-ellipse lihambelana ne-axis enkulu kwaye landisa ukunqanda kweso-clock, njengoko kubonakala ngasentla:
Post edlulileyo«Ngaphambilini ISAHLUKO 3: AMANQAKU NAMAKHAKATHI
Post Next 5.7 PolygonsOkulandelayo »